admin / 16th January 2018 / No Comments
Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, ayaa hotelka Grand ee magaalada Garoowe, casho sharaf ugu sameeyay madax ka socota hay’adda Safer-world oo maalmahan howlo u joogay caasimadda Puntland. Xafladda Cashada oo ay joogeen xubnaha Guddiga, ayaa lagu sagootinayay madaxdan oo muddooyinkii u dambeeyay guddiga kala shaqaynayay...	more →
admin / 15th January 2018 / No Comments
Guddiga Doorashooyinka Puntland, ayaa xayaysiiyay shaqooyinka labo Xafiis oo kala ah; Xisaabiye Guud iyo La taliye Sharci. Si aad u akhrisato xogta lagaa doonayo iyo qaabka aad u codsanayso fadlan liix Linkiyada Buluuga ah ee ay ku qoranyihiin Shaqooyinka Bannaan. Xisaabiye Guud Taliye Sharci more →
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland, ayaa heshiis la gaaray hay’adda Safer-world, taasoo muddooyinkii dambe Guddiga kala shaqaynaysa arrimaha dimuqraadiyadda. Kulan ka dhacay xarunta dhexe ee Guddigu ku leeyahay magaalada Garoowe, ayaa labada dhinac ku gaaray heshiis muddo soconaya oo ku aadan sidii loo tayayn lahaa shaqaalaha...	more →
admin / 13th January 2018 / No Comments
Waxaa maanta xarunta dhexe ee Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland kulan ku yeeshay xubnaha Guddiga iyo madax ka socotay hay’adda Safer-world kuwaasoo kawada hadlay arrimaha dimuqraadiyadda Puntland. Kulankan oo uu shir Guddoominayay ku-xigeenka Guddoomiyaha TPEC, Maxamud Soofe, ayaa diiradda lagu saaray sidii labada dhinac...	more →
admin / 9th January 2018 / No Comments
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland [TPEC], ayaa la kulmay ururada siyaasadda ee iska diiwaangaliyay xarunta guddiga kuwaasoo gaarayay tiro ahaan 4 urur. Shirkan oo uu guddoominayay Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga ayaa diiradda lagu saaray sidii TPEC iyo ururada is-diiwaangaliyay uga shaqayn lahaayeen hirgalinta nidaamka Axsaabta...	more →
Daawo Shirka jaraa’id ee Guddigu muddo kordhinta ku sameeyay
admin / 3rd January 2018 / No Comments
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayaa mar kale kordhiyay waqtiga loogu talo galay in lagu furto ururro siyaasadeed. Guddoomiyaha Guddigaas, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Garowe, ayaa sheegay in TPEC, iyadoo tixgalinaysa hirgalinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland ay muddo bil ah ugu...	more →
War saxaafadeed. Ka dib markii Guddigu dhegaystay codsiyo badan oo is daba jog ah oo uga yimi siyaasiyiinta danaynaya urrurada siyaasada iyo dadwaynaha Puntland. Guddigu Markuu arkay in wakhtigii diiwaan gelinta iyo qabashada codsiyada urrurada siyaasada uu dhamaaday kuna eegaa 31/12/2017. Hadaba Maanta oo taariilkhdu tahay 3/January/2018...	more →
admin / 24th December 2017 / No Comments
BOOSAASO, Puntland- Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ee T-PEC, ayaa shir wada-tashi ah oo ku saabsan hirgalinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland, ku qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Shirkan oo uu soo qaban-qaabiyay Guddigu islamarkaana ka dhacay hotel Gacayte, waxaa kasoo qayb galay Guddoomiye ku-xigeenka...	more →
admin / 13th December 2017 / No Comments
GAROWE (TPEC)- Wafdi uu hogaaminayo Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, ayaa dib ugusoo laabtay magaalo madaxda Puntland ee Garoowe, kadib safar shaqo oo muddo dhowr cisho ah ugu maqnaayeen caasimadda dalka ee Muqdisho. Xubnahan katirsan TPEC, ayaa casumaad ka helay Guddiga Doorashooyina...	more →
Waxaa maanta si habsami leh usoo gaba-gaboobay shir u socday Guddiga doorashooyinka Puntland ee TPEC, kaasoo looga hadlayay hormarinta Istaraatiijiyadda Guddiga. more →
© 6502 Tpec. All rights reserved. Designed by Asad